Uchwepheshe we-Semalt: Isiqondiso sokugwema ukukhwabanisa kwe-intanethi
Ukukhula nokuhlanganiswa kwe-intanethi ebhizinisini nasekuphileni komphakathi kuhle futhiinto embi. Ehlangothini oluhle kukhona izinzuzo eziningi i-intanethi enikezela njenge-E-commerce. Futhi ohlangothini olubi kukhona ukukhathazeka ngempelanjenge-cybercrime.
Phakathi kokukhathazeka okwesaba kakhulu ukukhwabanisa kwe-intanethi. Ukukhwabanisa kwe-Intanethi kwenzeka uma aumuntu usebenzisa i-intanethi ngesenzo sokukhohlisa okuhlose ukuthola inzuzo engathembeki phezu komunye umuntu. Ngokuvamile, isisusa esiyinhlokoUkukhwabanisa kwe-inthanethi kuyinzuzo yezimali.
Kunezinhlobo eziningi zokukhwabanisa kwe-intanethi, kodwa ezinye zivame ukubulawakunabanye.
Omunye wabachwepheshe abanolwazi kakhulu i-Semalt ,U-Andrew Dyhan, uchaza izinhlobo ezilandelayo zokukhwabanisa kwe-intanethi:
1. Izinkokhelo zenkohliso kanye nempahla yomthengisi
Abahlukumezi bamadayimenti okukhohliswa ngabathengi bezimpahla ezithengiswa ku-intanethi. Iisigebengu sizokuthumela umkhiqizo kwisayithi yendayisa ekhombisa ukuthi bayayithengisa kumthengisi ophezulu kakhulu. Umkhiqizo kungenzekaengekho noma uma ikhona, ihluke kulokho okukhangisiwe. I-scammer izama ukuthola umthengi ophumelelayo ukuthumela inkokhelo ephelelengoba lo mkhiqizo uthe ngaphambi kokuba ukuthunyelwa kwenziwe. Ekugcineni, isigebengu asiwuthumele umthengi kumthengi (okubizwa ngokuthi ukungavelikokudayiswa), noma umkhiqizo othunyelwe kungenye into, ngokuvamile ephansi kakhulu kunenani lomkhiqizo okhokhelwayo.
2. Ugaxekile kanye noBugebengu Bokweqile
Ama-imeyili ngezinye izikhathi ahlukunyezwa ngabakwa-scammers ukukhohlisa abasebenzisi be-intanethi abangaqapheli nomabangela ukulimaza kudivayisi abayisebenzisayo. Amanye ama-imeyili enkohliso afuna ukuheha umuntu ekunikezeni ulwazi lwakhe lomuntu siqu nolwezimali,kanti abanye baya phambili ekukhohliseni abantu ekuthumeni izimali ezicatshangweni.
Lawa ma-imeyili ayingozi azokwehlela ebhokisini lakho lokungenayo njengezaziso zenzalo ephansiukubolekwa kwemali mboleko, izinsizakalo ezifuna usizo ngezimali, ama-sweepstake winnings, nezinkinga ezihlobene nokuphila komphakathi. Bazoqukatha isixhumanisi okufanele uyenzechofoza ukuze uthole ukuthi abakwa-scammers bathi bayanikela. Ngokuchofoza okukodwa kokuxhumanisa, ungase uziveze ezingozini eziningi kubandakanya ukutholaikhompyutha yakho noma idivayisi ephathekayo igciwane lesandulela ngculaza, iveza abantu abangabazi amaphasiwedi akho, ulwazi lwekhadi lesikweletu, imininingwane yokuphepha komphakathi,amakheli nezinombolo zocingo.
Izigaxekile zivame ukuxhunyaniswa nokwebiwa kwezisi ngoba kungenzeka, futhi zivame ukusetshenziswafikela ulwazi lomuntu siqu olusetshenziselwa izinhloso eziningi kubandakanya ukuzenza..Imininingwane yomuntu eyebiwe ingasetshenziswa ukwenza enyeizinhlobo zokukhwabanisa kwe-inthanethi ezifana nezicelo zokukhwabanisa noma ukuthengisa.
3. Ukwebiwa kwekhadi lesikweletu
Ukukhwabanisa ngamakhadi esikweletu ngokuyinhloko kubambelela kubantu abangaqapheli uma bewasebenzisaamakhadi esikweletu. Abanye abantu baphonswa yimikhonyovu yobugebengu bokweqile.
Loluhlobo lokukhwabanisa lwe-intanethi luqala uma isisulu sithinta imininingwane yekhadi lesikweletu kuiwebhusayithi ephephile. Izigebengu zizosebenzisa lolu lwazi ukuze zenze izimali zithunyelwe noma zithengwe ngokusebenzisa ikhadi lesikweletu.
4. Ukunciphisa Ukutshalwa Kwezimali
Ukukhwabanisa kwezimali zokutshala izimali kuqhutshwa ngezinhlelo zokutshala izimali ezinhlanzi futhi kuhloswe ngazoukukhwabanisa abatshalizimali noma ukweba imininingwane yabo. Izikhwama zivela ngendlela yebhodi lamaphephandaba e-intanethi, izincwadi zezindaba zokukhokha, nomaezinye izinhlobo zokwazisa ulwazi olunikezela ulwazi olungamanga ngaphakathi. Lapho inamba yabatshalizimali bewela ukuhlaselwa, amanani esitokoziyashintshwa futhi isigebengu bese sithengisa amasitokisi akhe endaweni ehlelekile.
Ezinye izinhlobo zokukhwabanisa kwe-intanethi zihlanganisa amawebhusayithi angathembeki kanye nokukhwabanisa imali.
Amawebhusayithi angathembekile angalingisa izingosi ezisungulwe kahle nezivakashiukuthengiselana kanye nokusebenzisana njengokungathi bekungokoqobo. Imikhonyovu yesikhathi esedlule iningi ezweni lebhizinisi lanamuhla. Ungakwazi ukubonalolu hlobo logaxekile kalula. Uma umdayisi ephikelela ekubeni nemali ngaphambili futhi athembise ukubuyisela imali, lokho kusebenzelana kakhulukungenzeka ukuthi uyisabisa. Kungenzeka ukuthi izikhwama zingenzeka kakhulu ezitolo ezisendlini, ikakhulukazi.
Wonke umuntu udinga ukubuyekezwa ngaso sonke isikhathi ukuthi abakwa-scammers baqhuba kanjani i-intanethiubugebengu noma nini. Nazi amathiphu ambalwa:
Qinisekisa ukuthi noma yisiphi isayithi lendayini ofuna ukuyisebenzisa liyathembekile futhi sigweme izitolo ezintsha.
Ukusebenzisa indlela yokukhokha evikelekile futhi evikelwe.
Ungalokothi uqhafaze isixhumanisi esithunyelwe nge-imeyili ngaphambi kokuqinisekisa ukuthi umthomboi-imeyili inokwethenjelwa.
Ungalokothi uvumele ikhadi lakho lesikweletu lisetshenziswe ngaphandle kwamehlo akho
Nakekela kahle lapho wenza ukuthengiswa okukhulu noma ukuphendula okunikezwayo okwenziwe ku-intanethi.
Njalo hlola amaresidi akho ukuqinisekisa ukuthi wonke amanani alungile.
NOMA ubhale inombolo yakho yekhadi lesikweletu noma kuphi.
Ingabe leli khadi likhanseliwe uma ngabe ulibeka phansi.
Hlola njalo ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi ofuna ukuyisebenzisa yakho futhiidatha yedatha ku-URL iqala nge-https: // Source .